Sida loo daboolo khamaarista qamaarka internetka
Cosa adeegto dabool saamiyada sharadka khadka tooska ah?
In jargon farsamo dabool sharad waxaa loola jeedaa sameynta sharad labaad, oo loo yaqaan 'daboolka daboolka', taas oo si uun kuu oggolaaneysa inaad soo ceshato qadarka la jeexjeexay haddii ay dhacdo inaadan qiyaasin natiijada ugu weyn ee aad ku sharraxday.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan sharad 'baarashuud' waxaana badanaa loo adeegsadaa si loo daboolo barbaro haddii ay dhacdo in kooxda guriga aad ku sharraxdo sida aad ugu jeceshahay aysan guuleysan ciyaarta, laga yaabee inay ku dhacdo barbaro waqtiga dhaawaca.
Maxay u dabooshaa khamaarista qamaarka internetka
Su’aal wanaagsan. Xaqiiqdii, haddii aad horey ugu sharraxday qaddarka guushii Juventus ee gurigeeda 1,60 oo ay ka soo horjeesteen, tusaale ahaan, koox dhexdhexaad ah ama hooseysa, maxaad ugu huraysaa qayb dheeraad ah oo ah guushii horeyba u jirtay ee ugu dambeyntii aad gaari lahayd?
Xaqiiqdii, haddii guushii Juventus laga soo xigtay 1,60 iyadoo la adeegsanayo qaaciddada si loo daboolo isku aadka horay ayaan kaaga sheegay ► qui - taas oo aan qiyaaseyno inaan soo xiganay 3,6 - haddii saamigaaga ugu weyn uu yahay tusaale ahaan 50 euro, waa inaad sharad ku dhigtaa 19,23 euro oo dheeri ah si aad u daboosho haddii ay dhacdo isku dhac, ama haddii nasiib darro Juventus ay barbaro gasho halkii aad ka adkaan lahayd, waxaad ka soo kabanaysaa labada 50 euro ee sharadka ugu weyn (sharadka ugu weyn) ee ah 19,23 euro ee daboolka daboolka (shaashadda daboolka), iyo sida iska cad inaadan waxba ku guuleysan.
Haddii, liddi ku ah, aad ku guuleysato sharadka ugu weyn, si kastaba ha noqotee guuleysiga waa inaad ka goosataa kharashka ku baxay si aad u daboosho xarigga waxaana laga yaabaa inaad sidoo kale u maleyneyso in laga yaabo, adigoon naftaada dhib badan u qabin, inay ku filnaan laheyd inaad labalaabto fursadda 1-X ee 1,11 oo iska illow.
Maaddaama xisaabta aysan ra'yi ahayn iyo in haddii aad bustaha dhinac u jiido ay si nidaamsan u soo gaabinayso dhinaca kale, haddii istiraatiijiyaddaada qamaarku ay ku saleysan tahay natiijada keliya oo aad ku fiicantahay saadaashaan, markaa hubaal waad iska ilaalin doontaa sharadkaaga. damaanad qaadi lahaa soo laabashada sare ee maalgashiga haddii ay dhacdo in lagu guuleysto ka badan betka classic on fursada double.
Thanks to barnaamijkan loogu talagalay sharadka internetka ee aan xaq u leeyahay, maaha wax la yaab leh Gaashaanka Bet, waxaad awoodi doontaa inaad hesho taxane dhan oo xog ah duullimaadka si aad u gaadho go'aanka ugu fiican ee suurtogalka ah uguna daboosho sharadyadaada khadka tooska ah ee internetka sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Isticmaal Bet Shield si aad u daboosho khamaarista khadka tooska ah
Aynu isla markiiba aragno sida loo isticmaalo softiweerkan khadka tooska ah ee internetka Isku aadka tartanka waa inaad gashaa caqabadaha uu buug-yarahu ku siinayo natiijooyinka ugu dambeeya 1-X-2.
Meelaha hoose waa inaad doorataa Khamaarka ugu Weyn (bet ugu weyn ee loogu talagalay calaamad 1-X-2) iyo Shaashadda Gaashaanka (daboolka daboolka) isla markiiba ka dib geli qaddarka aad damacsan tahay inaad ku gasho Khamaarka Weyn (shaxanka waxaan u ekaysiiyey 10 cutub).
Adoo riixaya badhanka Calc waxaad isla markiiba arki doontaa inta lagu sharraxayo Shield Bet si aad u daboosho naftaada haddii ay dhacdo natiijo aan guuleysan ee Khamaarkaaga Main.
Qeybta tirakoobka waxaad ka heli doontaa:
Isku darka guud ee saamiga%: waxay noqonaysaa boqolkiiba inta itimaalka ah ee aad guud ahaan ku dabooleyso sharadyadaada; tusaalaha kore wuxuu noqonayaa 58% calaamada 1 (Main Bet) oo lagu daray 25% ee calaamada X, wadar ahaan 83% kiisaska suurtagalka ah.
Boqolkiiba Gaashaanka Bet iyaga ayaa xisaabiya shabaqa cashuurta codsatay buug-sameeyaha, waa inay sidaas darteed metelaan khilaafka dhabta ah dhacdooyinka.
UnNet Units ayaa faa'iido leh: meeqa qaybood ayaad heleysaa haddii aad ku guuleysato Khamaarka Weyn.
EtNet% kasbasho: sida kor ku xusan, laakiin lagu muujiyay boqolkiiba.
EtNet Units khasaaro / faa'iido: waxay u dhigantaa inta aad ku guuleysato ama lumiso haddii aad guuleysato Khamaarka Shied; qiimahaani waa inuu had iyo jeer noqdaa ama kayaryahay eber, maxaa yeelay xaqiiqdii hadaad ku guuleysato sharadka labaad waxba kuma guuleysatid ama waayi maayo.
Mahadsanid Gaashaanka Bet markaa waxaad awoodi doontaa inaad sifiican ugu maamusho khamaarkaaga caymiska iyo, sababta aan u dhicin, sidoo kale waxaad go'aansataa inaad daboosho khamaarrada marka laga reebo barbaro, haddii xaqiiqda, halkii aad ku sharxi lahayd calaamadda 1 oo aad isku dabooli lahayd calaamadda X, waxaad dooneysaa inaad beddesho amarka sababaha, waxaad ogaan doontaa in ... natiijada isbadashay!
Tusaale ahaan, ka fikir (isla ciyaartii sidii hore oo kale) inaad rabto inaad ku sharraxdo calaamadda X oo aad isku daboosho calaamadda 1, sida aad arki karto Gaashaanka Bet wuxuu ku tusayaa sida saamiga caymisku goaan ahaan u sarreeyo (16,39 unug oo ka dhan ah 3,57 kiiskii hore), laakiin sidoo kale waxsoosaarku si aad ah ayuu isu beddelaa, isagoo ka socda 18,64% ilaa 43,99%!
Ku garaac ganacsadaha Bet Shield
Sidee ugu wanaagsan ee loo adeegsadaa barnaamijkan khamaarka internetka? Uma ogolaanayo naftayda inaan kuu sheego sida loo ciyaaro, kaliya waxaan kuu sheegi karaa waxaan sameyn lahaa: sidaan horeyba u qoray ► qoraalkan, maqnaanshaha faa iidada dhabta ah iyo tixgalinta waqtiga jihada ee aan ku guureyno (waqti gaaban), sida kaliya ee runtii dhaawac loogu geysan karo ganacsade waa in lagu ciyaaro horumarka lagu guuleysto.
Waxba ma ahan xulashadu, waxa muhiimka ah ayaa ah in lagu ciyaaro dhacdooyinka iyadoo ay suurta gal tahay aad u sarreysa isla markaana dib loo dhigo saamiyada oo dhan in lagu ciyaaro tallaal kasta illaa laga gaaro yool cayiman (jooji guusha).
Mahadsanid Gaashaanka Bet sidoo kale waad xisaabin kartaa khamaarkaaga inta lagu guda jiro ciyaarta (sharad toos ah); wuxuu soo galayaa ciyaarta tusaale ahaan markaad aragto inaad dabooli karto in ka badan 90% ee caqabadaha (Wadarta Caymiska Guud) iyadoo la ilaalinayo 'Net% faa'iido' ka weyn eber isla markaana ku celiso wax walba illaa aad ka labalaabeyso qadarka bilowga ama bartilmaameedka inaad ku dhaqaaqday.
Tani waa istiraatiijiyad ku lug leh tallaabooyin badan oo yaryar, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in dhammaantood ay yihiin wax aad u xiiso badan oo ka dib oo dhan ha iloobin in hal milyan oo euro ay ka kooban tahay 100 milyan oo senti! (taas oo loogu talagalay diiwaanka u dhiganta saxda ah 230 tan oo ah bir duug ah).
Soo Degso Fayl	BShield.zip - 1 MB